Maradona oo isna doontay lacagta Shiinaha xil cusubna loo magacaabay – Gool FM
Maradona oo isna doontay lacagta Shiinaha xil cusubna loo magacaabay
Haaruun Yuusuf March 9, 2017
(Beijing), 09 Maarso 2017 –Kaddib Carlos Tevez iyo Ezequiel Lavezzi oo labaduba ku biiray Horyaalka Shiinaha ayaa waxaa haatan jidkaasi qaaday xidiggii hore ee Napoli iyo Argentina ee Diego Maradona, kaas oo maalmahaan sumcaddiisii isboorti si tartiib ah u soo ceshanaya.
Maradona ayaa loo magacaabay Safiirka Shiinaha ee dhinaca Horumarinta Kubadda Cagta dalkaasi oo haatan awood xowli ah ku soo galay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda caalamka.
Wargeysyada caalamka ayaa qaarkood tilmaamaya in Maradona uu barnaamijkaasi ku qaadan doono dhaqaale aad u fara badan iyadoo la ogsoon yahay sida kooxaha Shiinaha ay lacagaha fara badan ugu kharash gareynayaan Horyaalka dalkooda isla markaana mushaaraad khiyaali ah ugu qorayaan ciyaartooy da’doodu ka sare martay soddonka sano.
Sawir uu soo dhigay boggiisa gaarka ah ee Internet-ka ayaa la arkayay Maradona iyo mas’uul ka tirsan Shiinaha oo lagu magacaabo Tang Qinghui oo labada dhinac ka haya calanka waddanka Shiinaha.
Dhowaan ayay ahayd markii Xiriirka Kubadda Cagta Adduunka ee FIFA uu Maradona u magacaabay jagada Safiir cusub, taas oo astaan u ah sida sumcaddii Maradona ay dib ugu soo noqonayso.
GOOGOOSKA: Olympique Lyon vs AS Roma 4-2
Maxay FIFA ka tiri Qaladaadkii dhinaca Garsoorka ee kulankii Barcelona iyo PSG?